विवाहका लागि सही जीवनसाथी चयन गर्नु सबैभन्दा कठिन कार्य | Chhatapost.com
Home Breaking News विवाहका लागि सही जीवनसाथी चयन गर्नु सबैभन्दा कठिन कार्य
विवाहका लागि सही जीवनसाथी चयन गर्नु सबैभन्दा कठिन कार्य
विवाहका लागि सही जीवनसाथी चयन गर्नु सबैभन्दा कठिन कार्य हो । अहिले त विज्ञानका अनुसार पनि विवाहका लागि सही उमेरका बारेमा जानकार हुनु आवश्यक छ । ‘युनिभर्सिटी अफ उताह’ का प्राध्यापक निकोलस एच. वोल्फिङ्गरले गरेको एक अध्ययनका अनुसार २८ देखि ३२ वर्ष उमेरभित्र वैवाहिक जीवनमा प्रवेश गर्ने व्यक्तिहरूमा सम्बन्ध विच्छेदको सम्भावना कम हुन्छ ।
त्यहीँ ३२ वर्षको उमेर भन्दा माथि विवाह गर्ने र ४० वर्षको प्रारम्भतिर विवाह गर्नेहरूमा सम्बन्ध विच्छेदको खतरा बढेको पाइयो । ३२ वर्षपछि विवाह गर्नेहरूमा सम्बन्ध विच्छेदको खतरा हरेक वर्ष पाँच प्रतिशतले बढ्छ । ३० वर्षमा विवाह गर्ने मानिस आफ्नो विवाहका विषयमा बढी गम्भीर हुन्छन् र उनीहरूलाई आफ्नो वैवाहिक जीवन सफल बनाउन धेरै बोझ महसुस हुँदैन । यसकारण उनीहरू सुखी रहन्छन् र उनीहरूको वैवाहिक जीवन पनि सुखमय रहन्छ । यो अध्ययनअनुसार ३० वर्षका जोडी बढी समझदार र आर्थिक रूपबाट पनि मजबुत हुन्छन् ।
वोल्फिङ्गरद्वारा गरिएको रिसर्चअनुसार पुरुष र महिला दुवैले २८ देखि ३२ वर्षमा विवाह गर्नु उचित हुन्छ । विज्ञानका अनुसार विवाहका लागि यो सही समय हो । त्यसो त आजको भागदौडको जीवन शैलीमा करियरको चक्करमा ढिलो विवाह गर्ने प्रचलन बढ्दो छ । उच्चतम शिक्षा उपलब्धि, त्यसपछि सुरक्षित करियरमा अवतरण र त्यसमा समृद्ध वर्तमान तथा सुरक्षित भविष्य यी सबैको आवश्यकता पूरा गर्ने क्रममा समयमै विवाहभन्दा पनि ढिलो गरी विवाह गर्नेहरूको जमात बढ्दो छ ।
कुनै हदसम्म महिलाको तुलनामा पुरुषको काँधमा आर्थिक जिम्मेवारी बढ्ने गरेको पाइन्छ । यसको अर्थ महिलामा हुँदैन भन्ने अर्थ लाग्दैन । त्यसैले आर्थिक रूपमा दुवै सक्षम हुनु आवश्यक छ । अहिले महिलाले २५ वर्ष र पुरुषले २७वर्षपछि मात्रै विवाहका बारेमा सोच्ने गरेको पाइन्छ । यो उमेरसम्म आइपुग्दा महिला–पुरुष दुवै पक्ष धेरै हदसम्म मानसिक, आर्थिक एवं मनोवैज्ञानिक रूपमा मजबुत हुन पुग्छन् । वैधानिक रूपमा प्रमाणित भएको विवाहका लागि योग्य उमेरको यो अवस्थालाई धेरै युगल जोडीले स्वीकार गरेको पनि पाइन्छ । प्रजनन स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले पनि महिलाले ३० वर्षसम्ममा विवाह गरिसक्नुपर्छ । विवाहका लागि सही उमेर के हो ? यो एउटा त्यस्तो मुद्दा हो जसमा विभिन्न देशमा विवाहसम्बन्धी कानुनमा युवा–युवतीको उमेर कानुनतः तोकिएको पाइन्छ । हाम्रो देशको कानुनअनुसार महिला–पुरुष दुवैले २० वर्षपछि विवाह गर्न पाउँछन् । शिक्षाको आवश्यकतासँगै यसको प्रभाव विवाह गर्ने जोडीहरूको उमेरमा प नि पर्न गएको देख्न सकिन्छ । अधिकांश शिक्षित व्यक्तिले २५ वर्षपछि मात्रै विवाहका बारेमा सोच्ने गरेको पाइन्छ । यस पछाडिको प्रमुख कारण हो आफ्नो भविष्यको सुरक्षाका सम्बन्धमा व्यक्तिको जागरुकता । शिक्षाकै जागरुकताका कारण युवा–युवती शैक्षिक योग्यता, कार्यदक्षता र कार्यक्षमताको अभिवृद्धिपछि मात्रै विवाहको सम्बन्धमा निर्णय गर्नेतर्फ अग्रसर हुने गरिएको पाइएको छ । आफ्नो करियर र भविष्यको सुनिश्चितताबिना वैवाहिक जीवनका बारेमा सोच बनाउनेहरू बिरलै पाइन्छन् । यस कारण विवाह गर्ने उमेरमा प्रभाव पर्न गएको देखिन्छ । विवाहका लागि सही उमेरका बारेमा गरिएका धेरै खोजका अनुसार २९ वर्षको उमेरलाई परफेक्ट मानिएको पाइन्छ । यस पछाडिका कारणहरू :
विवाहका लागि तयार
विशेषतः युवतीहरूका लागि करियर र विवाहको प्रश्न अझ बढी हुन्छ । शानदार करियर बनाउने चाहना हरेकमा हुन्छ तर परिवारका लागि परम्परागत रूपमा महिला पक्षलाई नै जिम्मेवार मानिन्छ । यस्तोमा जबसम्म उनी मानसिक र शारीरिक रूपबाट पूर्णरूपमा तयार हुँदिनन् तबसम्म उनले सम्पूर्ण परिवारलाई सम्हाल्न सक्दिनन् ।
योउमेरसम्म आइपुग्दा आफ्नो जीवनसाथीमा के–कस्ता गुणहरू हुनुपर्छ भन्ने बारेमा राय बनिसक्ने अवस्था हुन्छ । कस्तो बानी, व्यवहार, विचार आदि मनपर्छ/मनपर्दैन भन्ने विषयमा तय भइसकेको अवस्था रहन्छ । अतः आफ्ना लागि सही जीवनसाथी चयन गर्ने मामिलामा गल्ती हुने सम्भावना कम रहन्छ र सम्बन्धको महत्व र आवश्यकतालाई बुझ्ने परिपक्वता पनि विकसित भैसकेको हुन्छ ।
शारीरिक रूपमा तयार
विवाहपछि जीवनमा परिवर्तन आउँछ । त्यसका लागि शारीरिक तथा मानसिक रूपले तयार हुने वा नहुने यसले सुखद् दाम्पत्य जीवनमा निकै प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्दछ । २९ वर्षमा महिलाहरू नयाँ परिवर्तन एवं मातृत्व सुख प्राप्तिका लागि पनि सक्षम र तयार हुन्छन् ।
करियरको प्रारम्भिक पाँच वर्ष कडा मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ । २४ वर्षको उमेरमा करियर प्रारम्भ गरेको भए कम्तीमा पाँच वर्ष पूर्णरूपमा आफ्नो करियरलाई दिनुपर्छ । २९ वर्षको उमेरसम्म आइपुग्दा आफ्नो काममा स्थापित भइसक्ने अवस्था हुन्छ । र यसकारण यतिखेर सहज रूपमा आफ्नो परिवारको सुरुवात गर्न सकिन्छ ।
स्वयंलाई राम्ररी बुझ्ने अवस्था
करियर प्रारम्भ भएपछि मात्र व्यक्तिले आफ्नो प्राथमिकता र आवश्यकताबारे राम्ररी बुझ्न थाल्दछ । करिब २८ वर्षमा व्यक्तिले जीवनका विभिन्न परिस्थितिलाई गम्भीरता पूर्वक बुझ्न थाल्दछ । कतिपयले २० वर्षकै उमेरमा विवाह गर्दछन् र ३० वर्षको उमेरमा पुग्दा विवाहले जीवनमा कुनै प्रकारको लाभ नपुर्‍याएको बुझ्दछन् र तिनका लागि वैवाहिक जीवनमा अझ बढी अप्ठ्यारो परिस्थिति देखा पर्ने हुन्छ ।
साधारणतया विवाह गर्ने महिला–पुरुषमा ३ देखि ५ वर्ष उमेर भिन्नता हुनु राम्रो मानिन्छ । सामान्यतया महिलाको उमेर पुरुषको भन्दा कम हुनु राम्रो मानिन्छ । यद्यपि यो मान्यतामा पनि समयानुसार परिवर्तन आएको पाइन्छ । अहिले वैवाहिक जीवनमा प्रवेश गर्नका लागि उमेर ठूलो कुरा रहेन । कतिपयका श्रीमती श्रीमान्भन्दा बढी उमेरका हुन्छन् । विवाहका लागि २९ वर्षको उमेर यस कारण पनि सही हो कारण श्रीमान्–श्रीमतीबीच उमेरको भिन्नता धेरै हुँदैन । दुवै जना परिपक्व हुन्छन् र स–साना कुरामा विमति र असमझदारीको सिर्जना हुने सम्भावना अत्यन्त न्यून रहन्छ ।
वैवाहिक जोडीमा पुरुषको उमेर बढी भएमा ऊ महिलाभन्दा बढी समझदार एवं सहयोगी हुन्छ । केही व्यक्ति मान्दछन् कि महिला पक्ष तुलनात्मक रूपले बढी भावुक हुने गर्दछन् र पुरुष पक्षको उमेर बढी छ भने उसले महिला पक्षलाई भावनात्मक रूपमा सहारा दिन सक्दछन् । केहीका अनुसार बढ्दो उमेरको प्रभाव पुरुष पक्षमा कम देखिने गर्दछ । जबकि महिला पक्षमा उमेरमा प्रभाव चाँडै देखा पर्ने गर्दछ । त्यसैले पनि वैवाहिक जोडीमा महिला पक्षको उमेर पुरुषको भन्दा कम हुनु ठीक रहन्छ । तर बायोलोजिकल पक्षबाट यस विषयमा प्रभावकारी आधार पाइँदैन । कतिपय पुरुष उमेरका दृष्टिले भन्दा पनि बढी उमेरका देखिने गर्छन् । केहीमा यो पनि मान्यता पाइन्छ कि वैवाहिक जोडीमा उमेर भिन्नताले सम्बन्धमा सन्तुलन प्राप्त हुन्छ कारण उमेरसँगै व्यक्तिको सोच पनि विकसित हुने गर्दछ । उसले परिस्थितिलाई अझ बढी राम्ररी बुझ्दछ र कुनै पनि अवस्थामा सही सन्तुलन कायम राख्ने क्षमता देखाउँछ ।
हिन्दू शास्त्रका प्रमुख १६ संस्कारमध्ये विवाह पनि एउटा हो । शास्त्रअनुसार यदि व्यक्तिले संन्यास ग्रहण गर्दैन भने हरेक व्यक्तिले विवाह गर्नु आवश्यक छ । विवाहपछि मात्रै पितृऋण तिर्न सकिन्छ । विवाहको शाब्दिक अर्थ हुन्छ, विशेष रूपबाट उत्तरदायित्वलाई वहन गर्नु । विवाहलाई पाणिग्रहण भनिन्छ ।
हिन्दू दर्शनका अनुसार आश्रम प्रणालीमा विवाहका लागि व्यक्तिको उमेर २५ वर्ष थियो जसबाट राम्रो स्वास्थ्य र कुपोषणको समस्याबाट छुटकारा प्राप्त हुने गर्दथ्यो । ब्रह्मचर्य आश्रममा आफ्नो पढाइ पूरा गरेपछि मात्र व्यक्तिले विवाह गर्न सक्दथ्यो । आश्रममा पढ्ने व्यक्ति संस्कारयुक्त मानिन्थ्यो । आश्रममा युवा–युवती दुवैका लागि शिक्षाको व्यवस्था हुने गर्दथ्यो । आश्रममा भर्ना हुनका लागि ७ देखि ८ वर्ष हुनुपर्दथ्यो । आश्रमबाहेक युवतीहरूका लागि घर वा त्यसको आसपास नै उचित शिक्षाको व्यवस्था हुने गर्दथ्यो ।
वास्तवमा विवाह संस्कार हिन्दू धर्म संस्कारमा त्रयोदश संस्कार हो । स्नात्तकोत्तर जीवन विवाहको समय हुने गर्दछ, अर्थात् विद्याध्ययनपछि नै विवाह गरी गृहस्थाश्रममा प्रवेश गर्नुपर्ने हुन्छ । शिक्षा विज्ञानका अनुसार २५ वर्षसम्ममा व्यक्तिको शरीरमा वीर्य, विद्या, शक्ति र भक्तिको पर्याप्त संचय हुन्छ । यो संचयका आधारमा नै व्यक्ति गृहस्थाश्रमका सबै साना–ठूला जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सक्षम हुन्छ ।
श्रुति बचनअनुसार दुई शरीर, दुई मन र बुद्धि, दुई हृदय, दुई प्राण र दुई आत्माको समन्वय गरी अगाध प्रेमको व्रतको पालना गर्ने दम्पतीले नै उमा–महेश्वरको प्रेमादर्शलाई धारण गर्ने गर्दछ, यही नै विवाहको स्वरूप हो । हिन्दू संस्कृतिमा विवाह कहिल्यै नटुट्ने एक परम पवित्र धार्मिक संस्कार हो, यज्ञ हो । वरवधूको जीवन सुखी बनिरहोस् भन्नका लागि विवाहपूर्व युवा–युवतीको जन्म कुण्डलीको पनि मिलान गर्ने गरिन्छ ।
वेदअनुसार स्त्रीलाई पुरुषकी सहचारिणी, अर्धाङ्गिनी र मित्र मानिएको पाइन्छ । यस आधारमा उमेरको अन्तर सन्तुलन आवश्यक छ । जैविक रूपबाट पुरुष आफ्नो उमेरभन्दा दुई वर्ष कम समझदार हुन्छ जबकि महिला आफ्नो उमेरभन्दा दुई वर्ष अधिक समझदार हुन्छिन् । अतः उमेरमा अन्तर राख्ने सल्लाह दिइन्छ ।
उमेरको अवस्था र यौन
वैज्ञानिकहरूका अनुसार व्यक्तिमा १४ देखि २१ वर्षको उमेरसम्म यौनसँग सम्बन्धित रसायन उच्च अवस्थामा रहने गर्दछ । यसै कारणले गर्दा यो उमेरमा व्यक्तिमा सबैभन्दा बढी शारीरिक परिवर्तन देख्न पाइन्छ । २१ देखि २८ वर्षसम्ममा व्यक्तिमा यौन क्षमता र चाहना सबैभन्दा उच्च बिन्दुमा पाइन्छ । २८ देखि ३५ वर्षसम्मलाई यौनका लागि उत्कृष्ट समय मानिएको छ । शोधहरूका अनुसार यो उमेरमा प्रायः जोडीले यौन जीवनको सबैभन्दा बढी आनन्द अनुभव गर्दछन् । ३५ देखि ४१ वर्षको उमेरसम्ममा प्रायः व्यक्तिमा शारीरिक तौल र स्वास्थ्यसम्बन्धी अनेकौं समस्या देखापर्ने भएकाले तिनको यौनप्रतिको रुचिमा कमी आउन थाल्छ । ४२ देखि ४९ वर्षको उमेरसम्म पुग्दा अधिकांश व्यक्तिमा यौनप्रति इच्छा कम हुन जान्छ । महिलाहरूमा यौन अनिच्छा र पुरुष यौन सक्रियताको स्तरमा कमी देखिने गर्दछ । ४९ वर्षपछि व्यक्तिको शारीरिक स्वस्थता, फिटनेस, मानसिक स्वास्थ्य र इच्छानुसार उसको यौन व्यवहार देख्न पाइन्छ ।
यौनविज्ञहरूका अनुसार वैवाहिक जोडीमा दुई–तीन वर्षको उमेर भिन्नता हुनु राम्रो हुन्छ । यसभन्दा बढी उमेर भिन्नताले तिनको यौन जीवनमा प्रभाव पर्ने सम्भावना रहन्छ । ४० वर्षसम्म पुग्दा अधिकांश पुरुषमा यौन सक्रियता तुलनात्मक रूपले कम नहुने विभिन्न शोधले देखाएको पाइन्छ । यदि पुरुष ४० र महिला ३० वर्षका छन् भने पुरुषमा यौन सक्रियता कम र महिलामा बढी हुने अवस्था रहने भएकाले विवाहको सुरुवाती समयमा यौन जीवनका समस्या नदेखिए पनि विस्तारै यो बढ्ने जाने यौनविद्हरू बताउँछन् ।
पुरुष उमेरमा जेठो भएमा
पुरुषको उमेर बढी भएमा यौन चाहनामा समानता पाइँदैन । विवाहकाप्रारम्भिक दिनहरूका महिलामा यौनभन्दा बढी भावनात्मक सुरक्षा र प्रेमप्रति लगाव बढी हुन्छ भने उमेरले जेठो पुरुषमा यौन सन्तुष्टि प्राथमिकता रहन्छ । यो अवस्थामा यदि पुरुषले महिलालाई भावनात्मक सहयोग र सुरक्षा दिन असमर्थ भएमा महिलाको पुरुषसितको आत्मीयता र लगावमा कमी आउन सक्ने बढी सम्भावना रहन्छ । यसको ठीकविपरीत विवाहको केही वर्षपछि यो जोडीमा महिलाको यौन सक्रियता बढ्न जान्छ र बढ्दो उमेरका कारण पुरुष यौन मामिलामा कम सक्रिय रहन थाल्छन् । फलस्वरूप उनीहरूको यौन जीवन सुमधुर रहन पाउँदैन ।
महिला उमेरमा जेठो भएमा
वैवाहिकजोडीमध्ये यदि महिलाको उमेर बढी भएमा महिलामा यौन व्यवहार र भावनात्मक पक्षमा परिपक्वता देख्न पाइन्छ । उनीहरू आफ्नो पुरुष सहयात्रीलाई यौन प्रक्रियामा सन्तुष्ट राख्न सक्छन् । पुरुषले पनि यौन जीवनलाई सक्रियतापूर्वक अँगाल्न सक्छन् । अतः यिनीहरूको यौन जीवन सुखमय हुन्छ ।
जोडीको उमेर बराबर भएमा
वैवाहिक जोडीको उमेर भिन्नता छैन र समान छ भने उनीहरूको यौन जीवन सुमधुर र सुखमय रहन्छ । दुवैले एक–अर्काको आवश्यकता, प्राथमिकता, चाहना र सन्तुष्टिलाई बुझ्न सक्छन् र सोहीअनुरूप व्यवहार पनि गर्न सक्छन् । अतः यौन जीवनमा समस्या देखिने सम्भावना अत्यन्त न्यून रहन्छ । – रोजिन शाक्य
Previous articleसबिता खड्काको खोजी कार्य जारी , कतै देखे परिवारलाई फोन गर्न अनुरोध
Next articleकिस्ता भुत्तानीकालागि बैंकबाट यसरी नै दबाब आइरहे गाडीको साँचो बैंकलाई नै बुझाउनु पर्ने अवस्था आउँछ – ज्ञानेन्द्र महर्जन